India: Ny fanafihan’ny mpampihorohoro ao Mumbai · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Novambra 2008 19:47 GMT
Vakio amin'ny teny 繁體中文, 简体中文, Português, Italiano, English
Hita taratra mazava any amin'ny tontolon'ny bolongana ny hatezerana mihatra amin'ny fantsom-baovao amin'ny fomba fitantarany ny fanafihan'ny mpampihorohoro an'i Mumbai. Ho an'ny sasany, dia naka ny paikan'ny “shock and shake” na “mandona sy manontsana” ny mpitati-baovao be mpanaraka izay mifanohitra amin'ny manamarina ny fisian'ny vaovao vao manambara ny fisiany. Saingy tahaka ny miraitra eo anoloan'ny fahitalavitra avokoa ny firenena, fa io angamba no manome vaovao “mivantana” indrindra amin'izao fotoana izao. Manoratra i Kalyan Varma:
Amin'izao fotoanan'ny fahasahiranana ara-toe-karena anivon'ny fanatontoloana izao dia ny manohy ny dia tsy manembonembona ny maty ary tsy manao ho vaindohan-draharaha an'io ihany no hahombiazantsika. Izay no hanoherantsika ny tahotra,fa tsy ny maka lagy amin'io, fa tsy ny manafika firenena na mampitsahatra ny fahafahantsika no hahatafavoaka antsika. Efa mila tsy ho tanty ny fisavana ny fiara sy ny entana isaky ny miditra trano fandraisam-bahiny eto Bangalore, tsy te-hanala na dia ny singany iray aza amin'ny fahafahako aho.
Ary misy ve ny afaka mampangina an'i Barkha Dutt ao amin'i NDTV. Fa izy indray no toa manapotika bebe kokoa ny firenena amin'izay lazainy noho izay nataon'ireo mpampihorohoro ireo.
Ary eo amin'ny fomba fijerina mpampita vaovao no anoratan'i Smoke Signals lahatsoratra miavaka momba ny vaovao sy ny momba ny tena.
Ny saiko mahakafaka no miteny amiko fa tsy nisy ny fepetra hitandroana ny filaminana; tsy nisy ny paika miaro ahy sy ny namako Mumbaikars tsy ho tratran'ny areti-mifindran'ny fahalianan-dra. Fa iza moa, raha mihaino ny antson'ny mpiara-miasa amiko mitantara amin'ny antsipiriany ny fipoahan'ny baomba atoraka sy ny firefodrefotry ny basy ary ny fiavosan'ny faty na mijery ny sarin'ny Taj Mahal Hotel – ary ankoatra izany, ho ahy sy ny namako Mumbaikars moa ‘hotel’ tsotra io? Reharehako mampiavaka an'i Mumbai io endriny io tahaka ny vada pav sy ny antsipika chai ary ny tso-dranon'ny Ganesha avy any Siddhivinayak ihany – moa mbola ho ahafahako mamakafaka? fa ny saiko tsy mamakafaka kosa nampandro ahy, nampiakanjo ahy ary nitarika ahy hiasa androany, hijery ny vaovao mikasika ny praiminisitra miresaka amin'izay hisolo azy handrafitra ny dia [ hiaraka fiaramanidina ve isika raha ho any Mumbai sa tsia? Ny fiaramanidin'ny praiminisitra no horaisina sa ny fiaramanidina mpitatitra olona? seza akaiky varavarankely no ipetrahana sa ny anatiny?] ary vinanio anie, fa angaha ianareo tsy mba manan-java-dehibe hafa, eo noho eo tokony atao? Moa ve tena mila ny iray aminareo na ianareo miaraka i Mumbai hitsakotsakoany indray ny teny izay efa mahazatra azy, hamoaka indray ny didin'ny ‘tsy maintsy miray hina ny firenena hanoherany ny loza mananontanona ny firenena?
Miresaka ny fomba itateran'ny haino aman-jery ny zavamisy i Falstaff ary milaza raha mba misy ny afaka mampiato [ilay fitantarana] manampy ny mpanafika [mpampihorohoro]:
Tena mba ratsy mihitsy ilay hevitra satria sahirana mifantina izay vaovao tena manaitaitra ny haino aman-jery fa tsy mba mieritreritra akory ny fiantraikan'izay lazainy. Tsy vitan'ny hoe atao mibahantoerana ilay vaovao hampisy horakoraka sy fikoropahana, fa dia misy ny mpanao gazety mitantara izay ataon'ny mpitandro ny filaminana sy milazalaza hoe iza avy no mbola voahidy ao amin'ny trano fandraisambahiny, lasa ny saiko manao hoe tsy efa azo heverina ho efa manome vaovao manampy ny mpanafika ve izany?